Anigu waxaan ahay gabar 14 sanno jir ah. Saaxiibadayda waxay ka hadlayeen waxyaabo ku saabsan barta-G. Maxaa lagaa midaasi? Anigana sidoo kale ma leeyahay? – Tips for refugees
Previous Previous post: Marka ay haweenaydu samayso galmo marka ugu horaysa: Miyay waynaysaa wax ka baddan hal litir oo dhiig ah?
Next Next post: Saaxiibkayga wuxuu ii sheegay oo ah (labb, 16 sanno jir ah): In labbo gabdhood oo dhigta iskuulka ay yihiin lammaane. Marka ay samaynayaan galmo: Miyay ahaanayaan kuwo bikro ah noloshooda oo dhan?